महाशिवरात्रि : यस्तो देखियो पशुपति क्षेत्रमा बाबाजीको लिला (फोटोफिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
महाशिवरात्रि : यस्तो देखियो पशुपति क्षेत्रमा बाबाजीको लिला (फोटोफिचर)
काठमाडौँ । आज महाशिवरात्रि, बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको भीड लागेको छ।
दर्शकको भिडसँगै मन्दिर परिसर वरपर साधु, सन्तपनि पनि उत्तिकै देख्न सकिन्छ। जाडोको प्रवाहै नगरी अर्धनग्न अवस्थामा साधु सन्तुहरु लामबद्ध बसेका छन्। त्यतीमात्रै हैन महाशिवरात्रीको अवसर पारेर विभिन्न स्थानबाट पशुपतिनाथ मन्दिरमा आइपुगेका साधु सन्तहरुले मन्दिर परिसरदेखि मृगस्थलीसम्म क्याम्प नै खडा गरेका छन्।
साधुसन्तुलाई दक्षिणा असुल गर्ने तथा गाँजाको व्यापार गर्ने राम्रो मौका समेत प्रमाद गरेको छ, महाशिवरात्रीले। मन्दिर परिसरमा पुजाअर्चना गर्न पशुपति पुगेका शक्तिजनसँग बाबाको सेवा गर भन्दै दान दक्षिणा मागेका दृष्य पनि देख्न सकिन्छ।
पशुपति क्षेत्रलाई गाँजा, भाङ मुक्त क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेपनि साधुसन्तहरुले भने खुलेयाम गाँजाको सेवन र व्यापार गरिरहेको देख्न सकिन्छ। गाँजाको सर्को तानेर हावामा धुँवा उडाउँदै राताराता आँखा बनाएर विभिन्न पोज युवतीसँग तस्वीर लिइरहेको दृष्यले भने धेरैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
पुजाआजाका लागि बिहान २ बजेदेखि नै भक्तजनको भीड लागेपछि ३ः१५ बजेदेखि पशुपतिका चारै ढोका खोलिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निर्देशक भोला सिटौलाले जानकारी दिए।
पशुपति दर्शनका लागि तीनतिरबाट मूल मन्दिर छिर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पिङ्गलास्थान, चार शिवालय हुँदै दक्षिण ढोकाबाट, जयबागेश्वरी–भुवनेश्वरी हुँदै पश्चिम सानो ढोकाबाट र मित्रपार्क–उमाकुण्ड–वासुकी मन्दिर हुँदै तीनतर्फबाट पशुपति दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यसवर्षको शिवरात्रिमा १२ देखि १३ लाख दर्शनार्थीले मन्दिरमा दर्शन गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। तस्वीर : रासस